Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Saber sy Jeju Air manavao ny fiaraha-miasa amin'ny fizarana maharitra
Jeju Air sy Saber Corporation dia manamafy ny fifandraisana maharitra satria ny mpitatitra manamafy ny famerenana ny làlana
Saber Corporation dia nanambara ny fanavaozana ny fiaraha-miombon'antoka maharitra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Low Cost Carrier (LCC) lehibe indrindra any Korea, Jeju Air. Ny fifanarahana nohavaozina dia midika fa hanohy hizara ny atiny Jeju Air amin'ireo mpitsangatsangana an'arivony maro, sy ireo mpandeha izay aroson'izy ireo, amin'ny alàlan'ny tsenan'ny dia lavitra manerana an'izao tontolo izao.
Rivotra Jeju mazàna miasa ny serivisy an-trano voalamina eo anelanelan'ny tanàna manerana an'i Korea Atsimo ary koa eo amin'i Seoul sy ny toerana iraisampirenena ao anatin'izany i Japon, Sina, Russia, ny Nosy Mariana, ary toeran-jotra lehibe manerana an'i Azia atsimo atsinanana. Ny fizarana ny votoatin'ny rivotra ao aminy amin'ny alàlan'ny Global Distribution System (GDS) an'i Sabre dia hijanona ho ampahany lehibe amin'ny paikadin'ny fanapariahana ny mpitatitra satria ny indostrian'ny fizahan-tany dia mbola manohy ny paikady fanarenana sy fitomboana ao anatin'ny areti-mandringana ankehitriny.
"Jeju Air dia mpanjifa Saber efa ela ary sarobidy ary faly izahay fa nanamafy ny fifandraisanay maharitra amin'ity fanavaozana farany ity," hoy i Rakesh Narayanan, filoha lefitra, mpitantana jeneraly isam-paritra, Asia Pacific, Sales Solutions Airline Sales. “Raha mbola miatrika ny fiantraikan'ny Covid-19 ny indostria dia mazava fa ny LCC dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolon'ny fizahan-tany, ary faly izahay afaka manohana an'i Jeju amin'ny tanjona stratejika. Ity fanavaozana farany ity dia porofon'ny fahatokisan'i Jeju ny tambajotram-fanaparitahan'i Sabre be dia be sy ny fahaizanay mivaingana ary ny fanoloran-tena hitarika fanarenana amin'ny tsena Koreana Tatsimo sy ny sisa. ”
"Efa nahita fanarenana matanjaka tao amin'ny tsenan'i Korea Atsimo nanampy ny toerana misy anay amin'ny làlana eto an-toerana ambony indrindra avy any Seoul mankany amin'ny Nosy Jeju izahay ary nanomboka nanohy ny sidina mankamin'ny tsena lehibe hafa," hoy i MyungSub Yoo, Tale mpitantana, Diviziona ara-barotra, Jeju Rivotra "Fantatsika fa ny lamina taloha amin'ny safidin'ny mpandeha sy ny fitondran-tena dia mety hitohy hiova ary mila mpiara-miasa amin'ny haitao mandeha lavitra izahay hanome ny vahaolana ilaina ilaina hahafahantsika mampifanaraka sy mitombo. Ny fitohizan'ny maha-ampahany ao amin'ny GDS an'i Sabre dia ahafahantsika mitombo ny tratra, mikendry tsena jeografika vaovao ary hahatratra ny mpanjifa avo lenta rehefa miakatra amin'ny ambaratonga teo aloha isika eo am-piomanana amin'ny paositra vaovao-Covid-19 ara-dalàna vaovao amin'ny fandaminana ny fiverenantsika amin'ny asa lehibe. "